Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ UK na -agbasa » UK na -edobe iwu mbata maka ndị mba ọzọ gbara ọgwụ mgbochi ọrịa
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ UK na -agbasa
A ga -eji dochie anya usoro ọkụ okporo ụzọ dị ugbu a site na listi uhie nke mba na ókèala nke ga -aga n'ihu dị oke mkpa iji chekwaa ahụike ọha, yana usoro njem dị mfe maka ndị mbata sitere na ụwa ndị ọzọ site na Mọnde 4 Ọktoba na elekere anọ nke ụtụtụ.
UK ga -ebelata ihe nlele maka ndị njem si mba ofesi tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi ma ha rute.
Ndị njem tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi ga -enwe ike iji ule mpụta mpụta mpụta dị ọnụ ala dochie ule nke abụọ ha.
Onye ọ bụla na -enyocha ihe dị mma ga -anọrọ onwe ya ozugbo wee were ule PCR na -akwado.
Onye odeakwụkwọ njem UK Grant Shapps kwupụtara taa na malite na Ọktoba 4, 2021, gọọmentị UK na -eme ka iwu mbata na ihe ndị chọrọ maka ndị ọbịa si mba ọzọ dị mfe.
Onye odeakwụkwọ njem UK bụ Grant Shapps
Usoro dị mfe maka njem mba ofesi n'ihi ihe ịga nke ọma nke mwepụta ọgwụ mgbochi ụlọ UK, ga -enye nkwụsi ike maka ụlọ ọrụ na ndị njem.
A ga -ebelatakwa ihe nnwale maka ndị njem tozuru oke ịgba ọgwụ mgbochi, ndị na -agaghịzi ewere PDT mgbe ha na -aga England site na Mọnde 4 Ọktoba 4am.
Site na ngwụcha Ọktoba, ndị njem nwere ọgwụ mgbochi zuru oke yana ndị nwere ọgwụ mgbochi akwadoro site na otu nhọrọ nke mba ndị na-adịghị acha ọbara ọbara ga-enwe ike iji nnwale mpụta mpụta dị ọnụ ala dochie ule nke ụbọchị 2, na-ebelata ọnụ ahịa ule na mbata. England. Gọọmentị chọrọ iwebata nke a ka ọ na-erule ngwụcha Ọktoba, na-ezube idobe ya maka mgbe ndị mmadụ ga-alọta ezumike ọkara oge.
Onye ọ bụla na -enyocha nke ọma ga -anọrọ iche wee were ule PCR na -egosi, na -enweghị ụgwọ ọzọ maka onye njem, nke a ga -ahazi usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa iji nyere aka chọpụta ụdị ọhụrụ.
Nnwale maka ndị njem na-anaghị agba ọgwụ mgbochi sitere na mba ndị na-achaghị ọbara ọbara ga-agụnye ule tupu ọpụpụ, ụbọchị 2 na ụbọchị 8 ule PCR. Nnwale ịhapụ ka bụ nhọrọ iji belata oge ịnọpụ iche.
Ndị njem ndị amatabeghị na ejiri ọgwụ mgbochi na asambodo nyere ha ọgwụ mgbochi nke ọma EnglandIwu njem mba ofesi, ka ga-anwale ule tupu ọpụpụ, ụbọchị 2 na ụbọchị 8 PCR ule wee kewapụ onwe ya maka ụbọchị iri mgbe ha lọtara site na mba ndepụta na-enweghị ọbara ọbara n'okpuru mmemme njem ọhụrụ nwere okpukpu abụọ. . Nnwale maka mwepụta ga -abụ nhọrọ maka ndị njem na -anaghị agba ọgwụ mgbochi na -achọ ibelata oge ịnọpụ iche ha.
“Anyị na -eme ka nnwale dị mfe maka njem. Site na Machị 4 Ọktọba, ọ bụrụ na ị na-agba akwụna nke ọma, ị gaghị achọ nnwale tupu ịpụ tupu ị bata England site na mba na-achaghị ọbara ọbara na site na mgbe e mesịrị na Ọkt, ga-enwe ike dochie ule ụbọchị 2 PCR. site na ọnụ ala dị ọnụ ala karịa, ”odeakwụkwọ Grant Shapps dere na tweet.
Sajid Javid, odeakwụkwọ ahụike na elekọta mmadụ, kwuru, sị: “Taa, anyị emeela ka iwu njem dị mfe iji mee ka ọ dịrị ha mfe nghọta na ịgbaso, imepe njem nlegharị anya na ibelata ego ị ga -eji gaa mba ofesi.
"Ka mbọ ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na -aga n'ihu na -aga n'ihu na ọtụtụ mmadụ na -enwetakwa nchebe pụọ n'ọrịa a dị egwu, ọ dị mma na iwu na ụkpụrụ anyị na -aga n'ihu."
September 26, 2021 na 07: 04
A ga -eji otu ndepụta mba na ókèala dochie sistemụ ọkụ okporo ụzọ ugbu a nke ga -aga n'ihu dị oke mkpa iji chebe ahụike ọha, yana usoro njem dị mfe maka ndị si mba ndị ọzọ bịa. Ọ baara anyị ezigbo uru.